हाेसियार बनाैँ ! म्याद सकिएको डेबिट कार्ड प्रयोग गरि एटीएमबाट ३४ लाख निकाल्ने २ जना पक्राउ
मङ्लबार, असार २२, २०७८ ७:३३
नेपाल अन्लाईन पत्रिका – काठमाडौं। हाेसियार बनाैँ ! म्याद सकिएको डेबिट कार्ड प्रयोग गरि एटीएमबाट ३४ लाख निकाल्ने २ जना पक्राउ । म्याद सकिएको डेबिट कार्ड प्रयोग गरेर सिद्धार्थ बैंकको एटीएम मेशिनबाट पैसा निकाल्ने २ जना प-क्राउ परेका छन् ।
पैसा निकाल्दै गरेको सूचना पाएपछि खटिएको प्रहरीले काठमाण्डाैको भत्केको पुल नजिकैबाट सोलुखुम्बु घर भएका जगतबहादुर गुरुङ र पर्साकी सावित्री गुरुङलाई प-क्राउ गरेका हुन् । उनीहरूको साथबाट एटीएम कार्ड र २१ लाख रुपैयाँ पनि बरामद गरिएको प्रहरी परिसर टेकुले जनाएको छ ।
उनीहरूले म्याद सकिएको ल्वयड्स बैंक लन्डनकाे भिसा डेबिट कार्डको प्रयोग गरेर चावहिल, कालोपुल र हात्तीसारबाट ३४ लाख ३५ हजार रुपैयाँ निकालेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
यसरी निकालेको रकममध्ये १० लाख रुपैयाँ सहकारीमा राखेको पनि प्रहरीले जनाएको छ । ***भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नु ***
‘अग्रिम पत्रकारिता’ पुरस्कार स्थापना पत्रकार आचार्यद्धारा
सविना गौतम - आइतवार, मंसिर १९, २०७८ १२:१८
चितवनमा पहिलो पटक क्रान्तिकारी पत्रकारका लागि ‘अग्रिम पत्रकारिता’ पुरस्कार स्थापना गरिएको छ ।